SingForYou.net - Than Yaw Zin
Tags : နေမြင့်လို့ အရူးရင့်ခဲ့တယ်.....သံယောဇဉ်။
By : MH on Apr 6, 2010
Score: 94 Rating: 4.95 Comments: 37
Than Yaw Zin's Description
ဘာတွေအလုပ်များနေမှန်းကို မသိပါဘူး.. သီချင်းလဲမဆိုနိုင် ဆိုလဲမဆိုချင် ဖြစ်နေတဲ့ကြားက ဆိုပါလို့ ပြောတဲ့ ချစ်သူကြောင့် ဆိုမိပြန်ပြီ။
mania on Aug 22, 2010 0
lawyerlay on Apr 12, 2010 0
pyouk hla gyi lar dat tha ya ...mae thi tar nar ko youk nay tar lar ..
forevermoe on Apr 7, 2010 0
mite tal byooo ....chit thu lay ka so khine lo lar ma thi po kg nay ta lo paee ..bro MH yay ..a yan mite tal ..ma moe arr pay twer par tal shin..*****************************
susannyunn on Apr 7, 2010 0
သံယောဇဉ်......................... taw taw soe te naw...........poem ta poat yay pay kel te...sai MH nelz mal tidaratwet.......SUSAN yay htar tar...a mat ta ya par......" yin mar twel nyeet....... THAYAWZIN kyoe......sa htet toe the........",,,,," poe. ma lwel par larz naw ......"...........................>>>MILLION STARZZZZZZZZZZZZZZ.....>>>
brownlay on Apr 6, 2010 0
thu. gyaunt so ya del pop? :D ********s nar htaung loe. ayann kg!
turikimuriki on Apr 6, 2010 0
nice as usual ... love it ... **********
hehehehe on Apr 6, 2010 0
Thanzinchitthu on Apr 6, 2010 0
kg lite tae so han byar..bro yay so htar tar shal pal byo.. arr pay nar sin twar par tal.....****************
achitsonethu on Apr 6, 2010 0
Chitthu ka taw tar pelz dar so see yone tar taw lite tar ho mar chat chin so kon p ar pay nar sin twar par tal nor***************)) :Clapzzz
Rosies on Apr 6, 2010 0
arr pay par del shin 5*******************
whitekisslay on Apr 6, 2010 0
Dar Ka ....သံယောဇဉ်...သံယောဇဉ်....palzzz...clap:clap:clap Bravooooo MH bro>>>>>>>>>>Mite te>>End ahti ko lane mar buuuu:D>>>>>>>>>>>>>
kthetkawmu on Apr 6, 2010 0
Clap.....Clap.....Clap.....Clap.....Clap.....Clap.....ayann kg tal bro yay...ayann like tal**********
MH on Apr 6, 2010 0
ကျွန်တော့်ကို တဖြောင်းဖြောင်းတီးသွားတဲ့ ( လက်ခုပ် ) ညီမလေးကို ကျေးဇူးမတရား တင်တယ်နော် ။
hippo on Apr 6, 2010 0
ဆိုလိုက်တော့လည်း နားထောင်ကောင်းနေတာပါပဲ။ ***** as usual.
ဟစ်ပိုရေ .... ကျေးဇူးအပုံကြီးတင်တယ်... :D
paradise on Apr 6, 2010 0
...သံယောဇဉ်... သံယောဇဉ်...သံယောဇဉ်... သံယောဇဉ်...သံယောဇဉ်... သံယောဇဉ်.......mite dal...MH Gyi yay........Lay Phyu ne'...lu so pyan pyi...naut ta yaut......:D
မတတ်နိုင်ဘူး ပါရာရေ ... ဘဲကြီးက ဇွတ်ပဲ ။ ဘယ်သူဆိုဆို သူပါလိုက်ဆိုနေတာပဲ မုန်းစရာကြီး ။
sumyar on Apr 6, 2010 0
lay phyu than yaw zin tway lu tine lo lo mar shi nay kya par lar.... yan tite pay loh ya ma lar hinn... pyaw loh pyaw tar ma hote buu MH so tar sis skywalker htet p kg tal...heehee... yan ma pyit kya nae naw...
skywalker on Apr 6, 2010 0
ဘာပြောတယ် ...နာ့ ကို ဒေါင်းပြိးယူသွားတာ ကို .. ခုတော့ ဒဿကောင်းတယ် လို့ ရန်ဖြစ်ရတော့မှာပေါ့လေ...ဟဟဟ
အမလေး ငါ့ညီမလေး တော်လိုက်တာ .. အမှန်ကို မြင်တတ်တယ် မုန့်ဝယ်ကျွေးမယ်နော် ။
wadanar on Apr 6, 2010 0
တော်သေးတယ်...ဟီး..ဖြတ်ဖို.ခက်တယ်...သံယောဇဉ်... သံယောဇဉ်....This is one of your greatest songs friend MH...Bravo********************
အောင်မငီး ဘာကိုဖြတ်ချင်တာလဲ နော် ... ကြောက်ချာကြီး။
lalaynge on Apr 6, 2010 0
တံယောဇဉ်..တံယောဇဉ်..ရူးနေပလားဟိတ်ကောင်..MH ကို IMH လိုက်ပို့ ပေးမယ်.. သိတယ်နော်..ဘယ်နေရာဆိုတာ..ဟဲဟဲ..
ဟဲ့ နင်သွားအဲကို အရင်... ငါက ROM သွားမှာ နင့်ကို လာတော့ကြည့်ပါမယ်ဟာနော် ...။
joeyouke on Apr 6, 2010 0
bro MH yae....a yan kg...shal kg...good shal...meet tal...mite tal....bro sing te' song arr lone ko arr pay nay tal nor...5****** from sis joeyouke....
အိုးပုတ် ဂျိုးရုပ် ..... အမြဲတမ်းအားပေးတာ ထာဝရကျေးဇူးပါ။
KoBurma on Apr 6, 2010 0
★__________★__★★★_____★★______★_★★★_ ★__★_.____★____.★_____★_____★___.★_________ ★___★_.___★____.★____★____________★_________ ★____★.___★____.★___★_____________★_★★___ ★_____★.__★____.★____★____________★_________ ★______★_.★____.★_____★______★__.★_________ ★__________★__★★★______★★_____.★_★★★ သန်တုန်းက ရော ထား တဲ့ မိဇင် အတွက် ဆိုတာလားးး ??? :P:):D ဆို သွားတာ ရှယ်ပဲ ... နားထောင်လို့ကေဂျီ တယ်နော် ၅စတားစ် .... :P:):D
အမလေး ဘကြီးအောင် ရက်စက်ပြီ.... ဘုန်းကြီးအမှု ရွာပတ်အောင်လုပ်ရဘူးနော် သိလား ။
liontun on Apr 6, 2010 0
so thwar tar shal pae. ***********
ဘရာသာ လီယို ...thanksalot ဗျာ။
saikyaw on Apr 6, 2010 0
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်.. ခန လေးတက်ပြီးနားထောင်တုန်း ညီ အသစ် တင်တာ နဲ့ တိုး သွားတယ်... echo နဲ့ အသံထပ်နေ သလိုပဲ.. အဆိုကတော့ပြော စရာ မရှိပါဘူး.. ၁၈ ရက် Bukit Batok သင်္ကြန် လာခဲ့ လေ..ကိုယ် ရှိမယ် အဲ့မှာ..
ကိုစိုင်းရေ... လေးဖြူ BOB တခွေလုံးက ဒီမှာအဲလိုပဲ လေးဖြူ အသံကဖျောက်မရဘူးဖြစ်နေတယ်... ညီလဲ မဆိုတာကြာပြီအကို ခုပဲထဆိုတာအကို လာအားပေးသွားတာကျေးဇူး။ လာခဲ့မယ်...ချစ်ချစ်ပါခေါ်လာမယ်လေ။
သံယောဇဉ်...သံယောဇဉ်....ခံပြောရင် ...နဘန်ကျင်းချင် ....ခွီခွီ
လုပ်ကြပါဦး အရပ်ကတို့ရေ ... ၀ိုင်းအနိုင်ကျင့်နေပါတယ်ဗျို့ 
bluesea on Apr 6, 2010 0
i like this song so much..u r so good here..***** byar
ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါ၏နော် ။
Feedback : 41